के तपाइलाई रातमा निन्द्रा लाग्दैन ? अपनाउनुहोस् यि उपाय ! - lekhpati.com
काठमाडौं । दिनभरिको थकान मेटाउनको लागी हामीलाई निन्द्रा निकै आवश्यक छ । यदी हामीले हाम्रो निन्द्रा राम्रोसँग पुर्याउन सकिनम भने हामीलाई विभिन्न प्रकारको रोग लाग्ने गर्छ । राति सुत्दाखेरी कतिपय मानिसलाई निन्द्रा लाग्ने गर्दैन । जसले गर्दा उनीहरुको निन्द्रा राम्रोसँग पुग्दैन । निन्द्रा नलाग्नुको कारण सुत्ने तरिकामा पनि भर पर्ने गर्छ ।
ग्याजेट्सबाट निस्किने ब्लू लाइटले मेलाटोनिन नामक हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ जसले निन्द्रा नआउने समस्या हुनसक्छ । त्यसैले सुत्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडि मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता सामानहरुको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।